Beekan Gulummaa Irranaa Afaan, aadaa, seenaafi eenyummaa saba Oromoo barreeffamaan ifa taasisuuisaatiin dararfamaa jira
Dorsisa, sosodachisuu fi bilbila bibilun hirba dhorka jirachuu isaani Yunivarsiitii Amboo fi Wajjira Birroo Barnnota Oromiyaa irra gabasa kana gadii argane jira.
Waggaa kana guutuu, asittan si ajjeesa...achitti duuta...nujalaa hinbaatu doorsifni jedhu...qaama afaanisaa beekuuf hinbeeknerraa isaatti himaamaa tureera....Haata'u malee ballessaaisaa ini hubachuu hindandeenye. Guyyaa har'aa kana isa dhumaaf biiroo ini hinbeekne gara Finfinneetti akkan dhiyaatuuf isaawaamanii jennaan gaafani callisu..irra deebi'anii nujalaa hinbaatu jechuun isaadoorsisan. Kanaafuu, ini guyyaan qabamauufi du'u hinbeeku Oromummaa isaa irran ala yakka tokko ilee hin qabu. Keessumattuu kan yeroo baay'ee bilbiluudhaan isaa dhiphisan keessa:
1. Dr. Mitikkuu Teessoo -Pirezedaantii Yunivarsiitii Amboo
2. Dr. Lakew Wondimmuu Ittaanaa Yunivarsiitii Amboo
3. Asegid......Itti gaafatamaa sirna barnootaa biiroo barnoota Oromiyaa
4. Nagaasaa Hundee Biiroo barnoota Oromiyaa
5. Abdiisaa Gannatii Biiroo Barnoota Oromiyaa (Nama shira qabamuu irratti xaxaa ture)
6. Margaa Dabaloo RTI
Namoon kun yeero kan isaa shororkeessaan ta’uun isaan beekamee jira.
Kitaaba kutaa 5-8 amma ini magaalaa sabbataa taa'ee gara namoota 20 waliin qopheessaa jirurratti mormituun keenya dhaloota keenyaaf qopheessuu hindanda'u jechuutiin akkan diina harka seenuuf shira mara fixanii kunoo akka bineensaaatti isaa adamsaa jiru...
Beekan Gulummaa Irranaa:-
1. kitaabota Afaan Oromootiin barreeffaman 22 barreesse galiisaa tokkollee utuu hinfudhatiin tola warra Guraagee kitaaba maxxansatanii raabsataniif kennuun garri kooppii 200, 000 ol hawaasa Oromoo qaqqabee jira...
2. Dhaloota kitaaba barreessan dargaggoota qubeefi maanguddootafi hayyoota Oromoo 90 ol ta'aniif barruu isaanii gulaaluufiidhaan mana maxxansaan gahee uummanni keenya akka afaansaan dubbisu taasiseera....
3. Moojulootaafi kitaabota qorannoo hedduu sadarkaa Yunivarsiitiitti qopheessee dhaloonni wabii godhachuun itti fayyadamaa jira... kanaafis ammoo sadarkaa biyyooleessaatti Yunivarsiitii Amboo bakka bu'ee barsiistota keesaa badhaafameen ture....
4. Yeroo ammaa kanas yunivarsiitii finfinneerraa dhimma afaaniif aadaarratti waggaa PhD waggaa sadaffaakooti (waggaa lama guutuuf abashoota qorannoo dhimma Oromoo hinjaallanne) isaaf ramadanii isaadararsaa turanii...erga gorsaa Oromoo tokko argatee reefuu torbee sadiidha...
5. Yeroo ammaa kana Yunivarsiitii barnootaaf isaa ergerraas akka
ini barnoota dhaabuufi akka isaamiidhuu danda'an deddeebi'anii isaa bilbilaniiru..qaama ini hinbeeknerraa ammoo guyyaa har'aa qofa yeroo 6 isaaf bilbilamuufi...ammaaf ammatti biyya kana gadi lakkistee hinbaatu taanaan duutikee beekamaadha jechuudhaan tererize' isaa gochaa jiru.
6. Kitaaba kutaa 5-8 baatii 5f yeroo isaa kennee dhalootaaf hojjechaa turee amma boqonnaa dhumaafi xumuruuf torbee tokkittiitti gale kana gatii dadhabbii isaa baatii shanii wajjin amma dhaabdee akka deemtu jechuun manaa iddoo hojiiti gadi isaa darbataniiru.
Yakka wayyanen dalaga jirtu kana kan dursine qulqulefaneen barreessinef Oromoo waan ta’ee qoofaf darrama Oromoo iraa ga’uu isiin hubachisuuf malee. Uummata Oromoo uni kana siniif barreessuunkeenya ini sodaatee yookaan lubbuunisaa kan dargaggoota keenya warreen qaalii ta'an nujalaa dhuman caaleef miti...garuu haqniifi hojiin ergamtoota mootummaa kun ol adeemtotarratti raawwataa jirtu hubachiisuu malee...
Beekan Gulummaa ammas taanaan hanga gaafa isaa ukkaamsaniifi lubbuuisaa rasaasa isaaniitiin fuudhaniitti hojii barreessuuisaati akka itti fufu nuuf ibsee jira. Yeroo ammaa kanas kitaabota 8 kan seenaa, aadaa, afaaniifi keessumattuu hacuuccaa saba kanarra jiru barreeffamaan qindeessee gulaaltotaisaatti kennateen jira... akkasumas akka Oromiyaatti barreessitoota reefuu ka'aa jiran 300 ol walitti qabee hojiisaaniif hanga humnaisaa yaada kennaaaf jira. Egaa abidi, guddinaaa, hawwii jijjiiramaafi dagaaginaa ini yeroo samu isaati baatee demu kun garbiraatti hiikamuusaatiin dararfamni dhiiphu sammuu isaarra jiru obsa isaafixachiisee torban darbe guyyaa 3 f hoospitaala galee ciisee ture...ammammoo kan caalu isaatti dhufee samuu isaa jeeqa jira.
Oromoo irrati dhibban goodhamuu Oromoo haqa jiru dubachuu fi bareesu irraa isaa dhabuu akka hin dandeenye Beekan Gulumaa akkasiti ibsaa “Oromoon lubbuun jirtan kamuu dhugaa isin keessa jiru kamuu ifa gocuuf...saba guddaa galaana kanaaf afaaan taatanii dubbachuufiif boqonnaa argachuun isinirra hinjiru.. ani gamakootiin garaachikoo hanga luqqa'utti kitaabota Oromoo baadhee olii gadi fiiguun nasabaan gaheera...hirriba dhabee halkaniif guyyaa hojjechuun afaan keenya kana achi buteera...adaraa Yaa Oromoo ani kana booda du'u hanga narraa eegamu mara hojjechuu baadhus ifaa dheera, Ammaaf waan garaakoo mara dubbadhee xumuruu waanan hindandeenyeef...asumarratti dhaabeera...kana booda sanyiinkoo (kitaabonnikoo) hawasa gidduu jiran bakka bu'anii naaf haadubbatan...Oromoon dhaloonni didichee dhufaa jiru...marti naaf haadubbatu. Uummanni Oromoo ifaajee dhaloota har’a jiru kanatiin galmasaa birra nigaha, Afaan Oromoo Afaan Itoophiyaa guddicha, kan Afriikaafi kan Addunyaa nita’aa, Afaan ittiin Yunivarsiitii Addunyaa kanaa kessa barsiisan ni ta’aa, Oromoon xiiqeffadhaa, erga koo kana kudhaammadha” jeechun yaada isaa nuuf ibsee
Namoonni isaa doorsisaa jiran kun yeroo isaanitti tarkaanfii isaanii kan kana dura dhalootarratti raawwataa turan sana isaa irrattti fudhachuuf yaala jiru. Beekan Gulummaa Irranaa Ija uumataa Oromoo Milliona 50 waan ta’eef Ummani Oromoo biyya ala fi biyya keessa jiran, kessatu Qubee Generation Beekan akka ija isaati ilaala Beekan nama siyyasaa utuu hin tanee hayuu Oromoo waan tayeef dhimmi isaa Oromoo hunda ilaalata. Dhabbilee Oromoo hundi OPDO dabalatee Hayuu kana Tigiren akka itti hin rororfneef hundi akka bira dhabatan shakii tokko hin qabnuu. Beekan Gulummaa Irrana kan Oromoo hundati.
Links About Beekan Guluma Irana